नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : डा. देबकोटाको राजनीतिक शल्यकृया : कृपया शुरु देखी अन्त्य सम्म ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला सुनिदिनुहोला मेरो अनुरोध ।
डा. देबकोटाको राजनीतिक शल्यकृया : कृपया शुरु देखी अन्त्य सम्म ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला सुनिदिनुहोला मेरो अनुरोध ।
डा. उपेन्द्र देबकोटा, नेपालका मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय जगत मै चर्चित न्युरो सर्जन । वहाँ मेरो अत्यन्त निकट मित्र पनि हुनुहुन्छ । वहाँ र म बिच एक प्रकारको पारिबारिक जस्तो सम्बन्ध पनि छ । असार पन्ध्रमा हामीले सँगै रोपाइ पनि गरेका छौं खेतमा, वीर अस्पतालको न्युरो बिभागमा सयौं पटक सर्जरी अँघी र पछी, शनिबार आईतवार देबकोटा निवासमा घण्टौं राष्ट्र र राष्ट्रियताका बिषयमा चिन्तन मनन गरेका क्षण त कती कती । मन्त्री हुँदा मन्त्रालयमै पनि, सँगै हेलिकोप्टर चढेर बिभिन्न जिल्लाका दुर्गम गाउँहरुमा पुगेर स्वास्थ्य शिबिरहरुमा न्युरोका बिरामीको उपचार गर्दाको एउटा साक्षीछु म, त्यो पनि एक पटक होइन धेरै पटक । खोइ किन हो कुन्नी हामी दुइको हर कुरा मिल्छ, मिल्थ्यो । वहाँका अठार घण्टा लामा न्युरो अप्रेशनमा अप्रेशन थिएटरमा सँगै मुखमा मास्क र तोकिएको पोशाक लगाएर मैले अप्रेशनहरु पनि हेरेको छु । चिउरा र पानीका भरमा वहाँले बिरामीको उपचार र अप्रेशन गरेको मैले धेरै पटक देखेको पनि छु । डा. देबकोटा मलाई र वहाँ लाई म चाहिन्थ्यो । नेपाल टेलिभिजनमा, रेडियो नेपालमा, प्रिन्ट मिडिया देखी बिभिन्न मिडियामा मैले वहाँ सँग दर्जनौ पटक कुरा गरेको छु, फिचर बनाएको छु । सधैं क्लिएर बोल्ने देबकोटा सँग म अमेरिका बस्न थाले पछी भेटघाट टाढिएका छन यद्यपी मन, मुटु, माया, सदभाब सब कुरा झन नजिक । टाढा हुँदा झन नजिक पनि भैँदोरहेछ । वहाँ कि जीवन संगिनी डा. मधु दिक्षित देबकोटा बारम्बार म्यासेज पठाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ - खनालजी, हामीले यहाँ लाई धेरै मिस गरी रहेका छौं आउनुस नेपालमै आउनुस, सँगै बस्नु पर्छ, सँगै केही गर्नुपर्छ । म पनि निकटताका यस्ता मेसेजका उत्तरहरु यसै गरी फर्काउँछु । मैले पनि डा. देबकोटा, मधु म्याडम र ति छोरी हरु कसरी भुल्न सक्छु र ! आज यो अन्तर्वार्ता हेरेँ । गर्वले छाती फुलेर आयो डा. देबकोटा प्रति जसले कुनै कुरा नलुकाइ, मन भित्र नराखी खुलस्त देशको बर्तमान अवस्थाको पनि शल्यकृया गर्नुभएको रहेछ । शान्ती र संबिधानका नामको लुटको खेतीको पर्दाफास गर्नुभएको रहेछ । सँघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ नेपालको राजनीतिका बारेमा आन्द्रा भुँडी खोतल्नुभएको रहेछ । यसले हामीले बिगतमा गरेका अन्तर्वार्ताको पनि याद दिलायो र यो एक पटक सबैले सुन्नै पर्ने हेर्नै पर्ने डा. देबकोटाको राजनीतिक शल्यकृयाको अन्तर्वार्ता यहाँ शेयर गर्न पनि मन लाग्यो । कृपया शुरु देखी अन्त्य सम्म ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला सुनिदिनुहोला मेरो अनुरोध ।